लकडाउनमा भर्चुअल भ्रमण ! - चारदिशा
April 22, 2020 चारदिशा समाज
हिजो आइतबार बिहान केहि समय घाममा मौन बसें ! विगत चार हप्ता देखि घरमै छौं । खै किन हो बिदाको मज्जा लिन मन लाग्यो । सोचें बिदा भनेको दैनिक काम भन्दा फरक काम गर्ने न हो ! अरु बेला त बिदा भन्ने बित्तिक्कै घुम्न जाने गरिन्थ्यो । अझ यस्तो मौसममा त समुन्द्र तिर पुगौ पुगौं लाग्थ्यो ।
बिदा त मनाउनै पर्यो के गर्ने होला ? अघि पछि गरेको काम नगर्ने भनेर पढिएन , लेखिएन फिल्म हेरिएन, बगैंचामा खन्ने पानी हाल्ने गरिएन साथीहरु संग त्यति संपर्क पनि गरिएन , गाउने बजाउने त कुरै आयन ( अहिले सम्म धेरै त्यही गरेकोले ) !
ल त्यसो भए महाभारत हेर्ने भनियो एक छिन हेरे पछि ध्यान केन्द्रित भएन बुझ्नै गारो! बुद्धको बारे बनाएको छोटो डकुमेन्ट्री हेरियो।
केही समय अगाडि अक्सफोर्ड को बुद्ध बिहारमा लद्दाख को एक जना भिक्षु सँग भेट भएको थियो। लामो कुराकानी भयो । समय मिले त्यहाँ जाने कुरा पनि भयो । त्यस पछि धेरै पटक हामीले लद्धाखको बारे युट्युवमा हेर्दै आएका छौं। अति रमणीय सुन्दर प्राकृतिक स्थल हुनु पर्छ भन्ने सजिलै अन्दाज लगाउन सकिन्छ।
अब सामान्य रूपमा पहिला जस्तो घूम फिर गर्ने दिन छिट्टै आउला जस्तो छैन । फेरि एक जुनीमा चाहेका सबै ठाउँ जान सक्ने कुरा पनि भएन । अहिले झन चार दिवार भित्रको जीन्दगी बिताउँदै गर्दाको अवस्थामा संसार घुम्न पाउनु खुसीकै विषय हुने भयो । आज साच्चिकै भर्चुअल बिदा मनाउने बरु कहाँ जाने होला भनेर सोच्दै थिए । झट्ट यस्तो सुझायो ।
संसार भर कोरोना को संक्रमण छ । सबै सशंकित छौं। सबैलाई मृत्युको निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ तर घरको झ्याल ढोका बन्द गरेर यो निमन्त्रणामा सरिक नहुने कोशिश गरी रहेका छौं ।
छापा , सामाजिक सञ्जाल , रेडियो , टेलि भिजन जताततै मृत्युको खबर मात्र छाई रहेको छ । ओलम्पिक मा प्राप्त पदक तालिका झै को कति कहा संक्रमित भय ‘मृत्यु भए त्यही नै पढ्ने र अरूलाई सुनाउने काममा व्यस्त छौं हामी । म भने यो छुट्टी मनाउन कुन चाहिं देश सुरक्षित होला भन्दै हेर्न थाले ।संक्रमणको हिसाबले यमन ठूलो र धेरै जनसंख्या भय पनि अहिले सम्म सबै भन्दा मुनि उल्लेख भयको देश रहेछ । त्यहा एक जना मात्रै बिरामी रहेछ। त्यो पनि UAE बाट समुन्द्री मार्ग हुदै यमन आयका एक बिदेशीमा संक्रमित भयको प्रमाणित यहि अप्रिल १० मा मात्रै भयको देखिन्छ।हाल सम्म कुनै थप बिरामी भेटिएको छैन ।करिब २९ ,६८७ ,२१४ ( दुइ करोड छयानब्बे लाख ) जनसंख्या भयको यमन को छिमेकी देशहरु ओमान र साउदी अरेबिया हुन् ।मध्यपूर्वको देश प्राय सबै तिर त्यस्तै होला भनेर अलि रमाइलो नै गरौ न भन्ने लाग्यो । अरु ठाउँ हेर्न मनलाग्यो ।
हाल सम्म ४१० बिरामी भयका त्यस मध्ये २३८ जना उपचार पछि घर गइ सकेका अनि १७2 अझै उपचार भै रहेको देश भनेर देखिएको टापु REUNION नाम सुन्दा पनि अलि बेग्लै लागेर युट्युब र गुगलमा घुम्ने विचार आयो ।
उपलब्ध भएका केहि भिडिओ हरु हेरियो । यो एउटा सुन्दर टापु सन् १५०७ तिर केहि पोर्त्चुगिजहरुले पत्ता लगायर बसोबास गर्न थाले। शुरुमा यस टापुको नाम SANTA APOLONIA राखिएछ । सन् १६४० तिर फ्रेन्च हरुले आधिपत्य जमाउन थाले । त्यहा उखु र कफीको धेरै उत्पादन हुने हुदा अफ्रिका तिरबाट दास बनायर केहि मानिसहरु सन् १६६५ तिर ल्याएको देखिन्छ ।सन् १६७१ सम्म त्यहा ९० जना मानिस बसोबास गर्दथे जुन १७१७ सम्म आइपुग्दा २००० को हाराहारीमा पुग्यो।सन् १७९३ देखि यो टापुलाई LA REUNION भन्न थालियो ।सन् १८१० देखि १८१५ सम्म भने यो टापुको स्वामित्व बेलायतको रहेको देखिन्छ ।सन् १८३० मा यहाको जनसंख्या एक लाख एक हजार तीनसय पुग्यो।त्यहाँ पनि सन् १८४८ बाट दासत्व उन्मुलन भयर सबै दासहरु नागरिक भयको देखिन्छ ।सन् १९४६ बाट यस टापुलाई FRENCH OVERSEAS DEPARTMENT को मान्यता मिल्यो जुन १९७४ देखि FRENCH OVERSEAS REGION बन्यो।फ्रान्सको यस्तो अधिनस्थ क्षेत्र मान्यता प्राप्त ५ वटा टापु रहेको छ।
यहाको प्रशासनिक भाषा फ्रेन्च भए पनि स्थानीय ९० % स्थानीय मानिसहरुले Reunionese Creole आफ्नै भाषा बोल्दछन । यहा ८६.९% क्रिस्चियन, ६.७% हिन्दु र ३.२% मुस्लिम धर्मालम्बी हरु रहेकाछन । यो टापुमा २५.६% स्थानीय गोरा ,४२.०६% काला, सेता, एशियन ,३.४% चाइनिज ,३.४% इस्ट अफ्रिकन रहेको देखिन्छ भने २०% तमिलहरु बसोबास गर्दछन ।यहि तमिलहरुको कारण त्यहाँ बढी हिन्दु देखिएको हुनु पर्छ । INDIAN OCEAN मा अबस्थित यो टापू अफ्रिकी महादेशमा पर्दछ।धनी र गरिब बीच ठुलो खाडल रहेको यो टापुमा बेरोजगारीको समस्या देखिए पनि प्रति व्यक्ति सरदर बार्षिक आम्दानि २५,९०० अमेरिकी डलर देखिन्छ। यहाका मानिसहरुको सरदर आयु करिब साँढे छैहत्तर बर्ष रहेको छ ।
६५ किलोमिटर लम्बाई र ५० किलोमिटर चौडाई भएको यस टापुमा हाल ८,५९,९५९ जनसंख्या रहेको छ । छिमेकी देशहरु मोरिसस र मदागास्कर रहेको यो टापू बिश्व को २३५ देशहरु मध्ये जनसंख्या को हिसाबले १६२ नम्बर र बिश्व को २३९ देशहरु मध्ये भूगोलको आधारमा १७९ सौ नम्बरमा पर्छ । ९९.०६% शहर र ०.४% मात्र गाउ भएको यो टापुको राजधानी चाही Saint-Denis हो ।१२.४ किलो मिटर क्षेत्रफल मा फैलिएको यो राजधानीमा करिब सवा लाख मान्छे रहेका छन्। यहाको प्रशाशनिक बिभाजन चार वटा Arrondissements २४ वटा कम्युन र ४७ वटा क्यानटोनमा विभाजित गरिएको छ ।यो टापु ज्वालामुखीको लागि संसार मै प्रख्यात छ । यहाको ज्वालामुखीको इतिहास ५ लाख बर्ष पुरानो मानिन्छ ।
INDIAN OCEAN मा अबस्थित यो टापू अफ्रिकी महादेशमा पर्दछ।धनि र गरिब बीच ठुलो खाडल रहेको यो टापुमा बेरोजगारीको समस्या देखिए पनि प्रति व्यक्ति सरदर बार्षिक आम्दानि २५,९०० अमेरिकी डलर देखिन्छ। यहाका मानिसहरुको सरदर आयु करिब साँढे छैहत्तर बर्ष रहेको छ ।
यो मुलुक सार्भभौम नभए पनि World Federation of Trade Union ,Indian Ocean Commission ,International Trade Union Confederation जस्ता केहि अन्तरास्ट्रिय संस्थाहरुको सदश्यता प्राप्त गरेको छ। युरोपियन युनियनको बिशेष आमन्त्रित सदस्यको हैसियत समेत पाएको यस टापुको मूद्रा पनि युरो नै हो ।
यहा स्थानीय रुपमा दुइ वटा काउन्सिलको लागि प्रत्यक्ष्य निर्बाचन हुन्छ । UNICAMERAL GENERAL COUNCIL मा ४९ र UNICAMERAL REGIONAL COUNCIL मा ४५ जना सदस्यको लागि छ छ बर्षमा प्रत्यक्ष निर्बाचन हुन्छ ।त्यहा बाट फ्रेन्च नेशनल एसेम्बलीमा पांच बर्षको लागि सात जना र सिनेटमा छ बर्षको लागि ४ जना प्रतिनिधि जाने गर्दछ ।
फ्रान्समा रहेको सबै राजनीतिक दलको सक्रियता रहेको यस टापुमा Reunionese Communist Party को पनि छुट्टै अस्तित्व रहेको देखिन्छ । फ्रान्स को दुवै सदनमा एक एक जना प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टी बाट पनि रहेको देखिन्छ । हाल UNICAMERAL GENERAL COUNCIL मा ८ जना प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टी बाट चयन भयका छन्।REGIONAL COUNCIL को प्रमुखमा सन् १९९३-८६ सम्म र १९९८ देखि २०१० सम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता चयन भयको देखिन्छ । अहिले त्यहा सबै भन्दा ठुलो पार्टी Union foraPopular Movement रहेको देखिन्छ ।
यो टापु रम उद्योगको लागि संसार प्रशिद्ध छ । यसको बिक्रीबाट धेरै अर्थ आर्जन र रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । पहिला उखु उत्पादन राम्रो हुने हुदा यहाको मुख्य आय श्रोत चिनीलाई मानिन्थ्यो भने अहिले पर्यटन यहाको मुख्य ब्यबसाय बनेको छ । यहा रहेको रास्ट्रीय निकुञ्ज (पार्क) विश्व भरिकै उत्कृस्ट पार्कको रुपमा मानिन्छ । त्यसैले १ अगस्त २०१० देखि प्राकृतिक रुपले अति सुन्दर यस टापुको करिब ४० प्रतिशत भूभाग UNESCO बाट विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यस टापुमा फ्रान्स , इंडिया , मदागास्कार , मौरिसस , तान्जानिया , कोमोरोस , दक्षिण अफ्रिका , चाइना थाईल्याण्ड र Seychelles बाट सिधै हवाई सुबिधा छ ।
पहिलो पटक सन् १९५० मा हालको तान्जानियामा देखियको ड़ेंगो जस्तै Chikungunya भाइरसले यस टापुलाई सन् २००५/०६ मा धेरै सताएको देखिन्छ । झन्डै एक तिहाइ मानिसमा संक्रमित भयको यो भाइरसले ज्यान भने २५४ ( १/१०००) जनाको मात्रै लियको देखिन्छ । तर त्यहाको जन जिबन र व्यवसायमा ठुलो क्षति पुर्यायको देखिन्छ । Indian ओचेअन का अन्य देश (टापु)हरु : Mayotte ( ३८ %जनसंख्या ) , Grande Comoros (२७% जनसंख्या) , मदागास्कर , माल्दिभ्स , मौरिसस , Seychelles मा पनि यसको ठुलो प्रकोप देखियो । भारतमा पनि चौध लाख मानिसमा यसको लक्षन देखियो । पाकिस्तान ,श्री लंका ,मलेसिया इन्डोनेसियामा पनि यसको प्रभाब परेको थियो ।
अहिलेको महामारीमा भने आज सम्म एक जनाले पनि ज्यान घुमाउन परेको छैन र उपचार हुनेको संख्या पनि राम्रो छ । आशा गरौ अन्त्य सम्म यो टापुमा कोरोना भाइरसले कसैको ज्यान लिने छैन । मौका मिले सांचिकै एक पटक केहि दिनको लागि त्यहा जाने इक्ष्या सहित यो हप्ताको भर्चुयल भ्रमण यहि अन्त्य गरियो । हाम्रै छिमेकी देश भियतनाम जहा ९,७१,६७,२९८ जनसंख्या रहेको छ । अहिले सम्म कोरोनाले २७४ जनालाई संक्रमित गरेकोमा २१६ निको भै सकेको ५२ जना उपचार भै रहेको छ । त्यस्तै कम्बोडिया जहा १,६७,१८,९६५ जनसंख्या रहेको १२२ बिरामी भयको ११० जना निको भै सकेको र १० जना उपचार गरि रहेको देखिन्छ । यी देशहरु बारे अलि बढी बुझ्ने इक्षा जागेको छ । अर्को हप्ताको छुट्टी त्यतै तिर मनाउन जाने विचार छ ।
सोमबार २० अप्रिल २०२०